Tag: mailaka statistika | Martech Zone
Tag: statistika mailaka
Tsy azoko antoka loatra fa ny statistikan'ny marketing mailaka tokana eto dia tena ilaina amin'ny marketing amin'ny mailakao, fa ny sasany amin'izy ireo dia tena misongadina amiko: Ny fidiram-bolan'ny mailaka mailaka dia ambany ary tsy dia ampiasaina firy. Gaga foana aho ao amin'ny bilaoginay manokana fa mivarotra tsy tapaka ny doka lohateny… fa tsy nisy nividy dokam-barotra tamin'ny alim-bolantsika isan'andro sy isan-kerinandro izay mahatratra 75,000 ny isan'ny mpanjifa isan-kerinandro. Ao amin'ny tampon'isa ny Adoption mailaka, miaraka amin'ny
Alakamisy, Jolay 14, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015
Dr. Todd's, tranokala e-varotra ho an'ny vokatra fikarakarana tongotra tsara kalitao, nitodika tany amin'ny SmallBox ho an'ny fonosana marketing amin'ny Internet. Singa iray lehibe amin'ny fifangaroan'ny marketing an'i Dr. Todd ny marketing amin'ny mailaka. Namorona paikady atiny vaovao izahay, famolavolana vaovao ary nandrafitra kalandrie fanontana. Nandinika ny iray amin'ireo mailaka fampiroboroboana nataon'i Dr. Todd izahay mba hampisehoana hoe inona no mahatonga ny olona hanindry sy hiova fo. Fanolorana mazava Mety efa naheno ny teny hoe "fanamafisana ny fanonganam-panjakana" ianao